२o७५ मङ्सिर १ शनिबार
विश्व । झट्ट हेर्दा सबैलाई यो तस्बिर साह्रै राम्रो, रमाइलो लाग्नसक्छ । तर सन् १९३३ मा लिइएको यो तस्बिरको पछाडि धेरै रहस्य लुकेको छ । तस्बिरमा देखिएको मान्छे एक जर्मन नेता हो । अझ भन्नुपर्दा उक्त मानिस ६० लाख यहुदीको मृत्युको जिम्मेवार निरंकुश र निर्दयी शासक एडोल्फ हिटलर हो भने ऊसँगै तस्बिरमा देखिएकी बालिका एक यहुदी मूलकी रोजा बर्नाइल निनाओ हुन् ।
"प्रिय रोजा निनाओ, एडोल्फ हिटलर, म्युनिख, १६ जुन, १९३३,"
उक्त पुस्तकको कभर यस्तो छ - (FRONTLINE BOOKS)
हिटलर र सेप्टेम्बर ११ को भविष्यवाणी गरेकाको दाबी : २०१९ मा तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुन्छ !
काठमाडौं । भविष्यद्रष्टा अर्थात् पछिको कुरा भन्ने व्यक्तिलाई कत्तिको मान्नुहुन्छ । यदि त्यस्ता मानिसको कुरा पत्याउनुहुन्छ भन्छे दुःखद खबर छ । आगामी २०१९ मा तेस्रो विश्वयुद्ध हुने एक भविष्यवाणी गर्ने
प्रधानमन्त्री ओली हिटलर बन्ने प्रवृत्तितर्फ उन्मुख - अर्जुननरसिंह केसी
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जंगबहादुर, स्टालिन र हिटलर बन्ने प्रवृत्तितर्फ उन्मुख रहेको गम्भिर आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले
विश्व । झट्ट हेर्दा सबैलाई यो तस्बिर साह्रै राम्रो, रमाइलो लाग्नसक्छ । तर सन् १९३३ मा लिइएको यो तस्बिरको पछाडि धेरै रहस्य लुकेको छ । तस्बिरमा देखिएको मान्छे एक जर्मन
के मर्ने लाइनमा बसेको कुनै व्यक्तिको दिल अरु कसैको लागि धड्किन सक्छ ? जब आफ्नो ज्यान नै नजोगिने र कसरी बचाउने भन्ने अन्योल र आपत् अवस्थामा कसैले आफ्नो ज्यानको बेवास्ता